I-Autoupdates isilela kwiWordPress? Ukusilela kwe-FTP? | Martech Zone
I-Autoupdates isilela kwiWordPress? Ukusilela kwe-FTP?
NgoLwesihlanu, ngoDisemba 31, 2010 NgeCawa, Oktobha 30, 2011 Douglas Karr
Kutshanje, sinomthengi oqwalasele iiseva zabo ukuba zisetyenziswe ngeWordPress. Xa kutshanje 3.04 ukhuseleko Uhlaziyo luye lwangena, bekukho imeko yongxamiseko yokufumana olu hlobo lufakelwe kubo bonke abathengi bethu. Nangona kunjalo, lo mthengi uhlala efuna ukuba siphucule iWindowsPress ngesandla… inkqubo ayiyiyo eyokuphela kwentliziyo!
Asinakufumana into eqhelekileyoAndikwazi ukubhala iifayile”Impazamo kule bhlog. Endaweni yokuba sanikwa isikrini ngokungena kwe-FTP. Ingxaki yayikukuba siza kugcwalisa ubungqina be-FTP kwaye iya kuba njalo ndisahluleka… Ngeli xesha lisekwe kwiziqinisekiso ezilungileyo!
Ndadibana nabahlobo bethu kwiiZiko loLwazi lweLifeline, eIndiana Elona ziko likhulu ledathaKuba banee-Apache geeks kwaye bazilungiselele ezabo iiseva. Baye bandinika isisombululo esilula-ukongeza iziqinisekiso ze-FTP ngqo ngaphakathi WP-config.php ifayile kwi-hardcode iziqinisekiso ze-FTP:
Ngesizathu esithile, iziqinisekiso ezifanayo ezingakhange zisebenze kule fomu, zisebenze ngokugqibeleleyo xa zibekwe kwifayile yoqwalaselo! Kananjalo, yenza ukuba i-WordPress isebenze nje ngendlela ngaphandle kwemfuneko ye-FTP…. cofa nje uhlaziyo kwaye uhambe!
Iindlela ezi-5 zokubulala uKhuphiswano lwakho noMxholo
Ngomhla wama-31 ku-Disemba 2010 ngo-3: 54 PM
Ndifumene iimpazamo zokuhlaziya ngokuzenzekelayo zeWordPress emva kokwakha kwakhona iserver yam kunye nokujikeleza ufakelo olutsha lweWordPress. Ingxaki yam ivele kwiFirefox, hayi kwiWordPress - abanye banokuba namava afanayo ukuba igama lomsebenzisi le-FTP kunye negama lomsebenzisi le-WordPress ziyafana nezam (nangona zazineemali ezahlukeneyo kunye neephasiwedi).
Ingxaki kukuba iFirefox, ukuba "ukhumbule iiphasiwedi" ezinikwe amandla, iya kulungisa ngokuzenzekelayo umsebenzisi / idlulise kwifom kwinto ecinga ukuba kufuneka isekwe kwinto egcinwe kumphathi wegama eligqithisiweyo. Kwimeko yam, iziqinisekiso zam zeWordPress zigciniwe, kodwa iziqinisekiso zam ze-FTP zazingekho, njengoko zinokusetyenziselwa i-SSH kwindawo leyo. Abantu abakule meko banokukhubaza okwethutyana "khumbula amagama okugqitha" kwiiKhetho / uKhetho lwabo xa uzama ukusebenzisa i-WordPress ukuzihlaziya ngokuzenzekelayo okanye ukufaka iqhekeza lekhowudi kwiWordPress ukulungisa le ndlela yokuziphatha.
Jan 1, 2011 kwi-4: 23 AM
Ndinengxaki efanayo nolwakhiwo lwasekhaya lweApache. Icacile isisiphumo semvume engafanelekanga kunye nobunini kwiifayile ezithile kunye nemikhombandlela.
Ikhonkco elingasentla linike ukuqonda malunga nendlela yokulungisa ingxaki ngaphandle kokusebenzisa ubungqina be-ftp. Ewe andicebisi ukuba usikrobe isikhombisi sakho sonke somsebenzisi siye ku-775 (kwaye khange ndenze njalo) kodwa oku kundikhokelele kwicala elilungileyo.
Jan 3, 2011 kwi-7: 21 AM
Abanye bafuna izisombululo ezinokubakho: Enye ibhlogi isombulule iingxaki zayo zokuhlaziya ngokuzenzekelayo ngokunyanzela umphathi wayo ukuba asebenzise i-php5 ngokongeza oku kulandelayo kwifayile yakhe.
Yongeza udidi x-mapp-php5 .php
Enkosi ngokwabelana ngolwazi, ndiye ndafumana iingxaki nge-autoupdates kodwa isisombululo endisifumeneyo kukususa iiplagi emva koko ndenze i-WordPress kwaye ekugqibeleni ndisebenzise zonke iiplagi.
Le ngcebiso yeyengxaki eyahlukileyo kodwa kulungile ukwazi ukuba ungayisombulula njani.